Semalt बाट निर्देशनहरू तपाईंको IP विश्लेषकबाट तपाईंको IP ठेगाना निकाल्न
के तपाईं गुगल एनालाइटिक्समा गलत परिणामहरू आफ्नै आफ्नै द्वारा भ्रमणको कारण अनुभव गर्नुहुन्छ? Google विश्लेषण खाता परिणाम आफ्नो आफ्नै IP ठेगाना निकाल्न, पालना सुझाव अलेक्जेन्डर Peresunko, ग्राहक को सफलता प्रबन्धक द्वारा stipulated Semalt :
१. गुगल एनालाइटिक्समा साइन इन गर्नुहोस्
२. तपाईको आईपी ठेगाना पहिचान गर्नुहोस्
Your. तपाइँको रेकर्डमा एक च्यानल थप्नुहोस्
Frequently. बारम्बार सोधपुछ गर्नुहोस्
गुगल एनालिटिक्स साइन इन गर्नुहोस्
प्रमुख कुरा भनेको तपाईको गुगल एनालिटिक्स खातामा साईन ईन गर्नु हो। यसले तपाईंको OptinMonster अभियान (हरू) को लागि आधिकारिक रूपमा तपाईंको Google एनालिटिक्स सेट अप गर्दछ र तपाईंको एनालिटिक्स रिपोर्टहरूको पहुँचलाई स्वीकार गर्दछ।
तपाईको आईपी ठेगाना पत्ता लगाउनुहोस्
हाल, तपाइँको अनुसन्धान जानकारी तपाइँको आईपी ठेगानाबाट प्रभावित हुनका लागि, तपाइँ तपाइँको रेकर्ड मा एक च्यानल जोड्नु पर्छ। तपाईले आईपी ठेगाना पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ तपाईले अहिले प्रयोग गरिरहनु भएको आईपी ठेगाना google.com मा खोज्ने मार्फत। तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ कि सबनेट्स र आईपी ठेगानाहरू जुन तपाईंको संगठनले प्रणाली निर्देशकबाट सोधपुछ प्रयोग गर्दछ।
आईपी स्थानहरूको लागि नोट: यस दृष्टान्तमा, हामी IPv4 ठेगाना (वेब कन्वेशन भेरियन्ट)) प्रयोग गर्दैछौं जुन छोटो छ, थप नियमित आईपी ठेगानाको प्रकार। तपाईंको रेकर्डमा एक च्यानल थप्नुहोस्
हाल, रेकर्डका लागि च्यानल बनाउने जुन तपाईंको आईपी ठेगानाबाट सबै रिपोर्टहरूबाट जानकारी निषेध गर्दछ। सुरु गर्न, इन्टरफेसको आधार बायाँ कुनामा प्रशासक ट्याब छनौट गर्नुहोस्। यसले असंख्य नियामक छनोटहरूको साथ अर्को पृष्ठ खडा गर्दछ। प्रशासक पृष्ठ तपाइँको लेखा टाढाको बायाँ खण्डको लागि विकल्पको साथ तीन खण्डहरूमा विभाजित गरिएको छ। यस खण्डबाट सबै च्यानलहरू क्लिक गर्नुहोस्।
पृष्ठले च्यानल बनाउनको लागि प्रयोग गरिएको फ्रेम देखाउँदछ
च्यानलको लागि नाम राख्नुहोस्
पूर्वनिर्धारित रूपमा च्यानल क्रमबद्ध गर्नुहोस्
छनौट च्यानल प्रकार ड्रप-डाउन मेनू क्लिक गर्नुहोस् र बार चयन गर्नुहोस्
चयन स्रोत वा लक्ष्य ड्रप-डाउन मेनू थिच्नुहोस् र आईपी ठेगानाहरूबाट गतिविधि पहिचान गर्नुहोस्
अभिव्यक्ति ड्रप-डाउन मेनू छनौट गर्नुहोस् र त्यो बराबर छनौट गर्नुहोस्
सामग्री क्षेत्र मा तपाईंको आईपी ठेगाना सम्मिलित गर्नुहोस्
यदि त्यहाँ कार्य स्थिति परीक्षण गर्न आवश्यक छ भने, तपाईं गुगल गाईड पछि लिन सक्नुहुन्छ जहाँ यो संकेत गर्दछ "च्यानल काम गर्दछ सुनिश्चित"। तपाईंको आईपी ठेगानाको माध्यमबाट सिफ्टि that जुन एक अधिक सटीक परिणामहरू अनुभव गर्दछ जुन परिवर्तन दर प्रभावकारिताको लागि विभाजन-परीक्षणमा विचार गर्नुपर्दछ।
प्राय: सोधिने प्रश्नहरूमा तल जानुहोस्:
प्रश्न: के म असंख्य आईपी ठेगानाहरू अस्वीकार गर्न सक्षम हुनेछु?
A: बन्द अवसरमा तपाईसँग असंख्य आईपी छ, एक या त एकल च्यानलमा विभिन्न ठेगानाहरू संकेत गर्न सक्दछ वा अन्य भन्दा बढी च्यानलमा प्रभाव पार्छ। यस्तै प्रकार, तपाईले निर्धारण गर्नु भएको शर्तहरू सुनिश्चित गर्नुहोस् कि च्यानलमा हस्तक्षेप वा उपेक्षा गर्दैन।
प्रश्न: म कसरी वर्ड प्रेसमा ग्राहकहरूमा साईन ईन गर्ने प्रभावकारी रूपमा निषेध गर्दछु?
A: एकले मॉन्स्टर इनसाइट्स भन्ने मोड्युलको उपयोग गर्न सक्दछ जहाँ एक व्यक्तिले आफ्नो म्यानुअल पछ्याउन सक्दछ विभिन्न प्रयोजनका ग्राहकहरूको हस्ताक्षर गर्न को लागी सहजै।